Akụkọ - Fiber Glass Mesh Market 2021 Uto Analysis site Top mba Data, Industry Trend, Sales Revenue, Market Size site Regional amụma ka 2024 na arkrịba Ama Rate
Fiber Glass Mesh Market 2021 Uto Analysis site Top mba Data, Industry Trend, Sales Revenue, Market Size site Regional amụma ka 2024 na arkrịba Uto Rate
Short Description About Fiber Glass Mesh Market: Faiba glaasi ntupu bụ a neatly kpara, crisscross ụkpụrụ nke faiba glaasi eri na-eji ike ọhụrụ ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka teepu na nzacha. Mgbe a na-eji ya dị ka nzacha, ọ bụghị ihe ọhụrụ na ndị nrụpụta na-agba ihe mkpuchi PVC iji mee ka ọ sie ike ma dị ogologo.
Dec 15, 2020 (The Expresswire) - Global “Fiber Glass Mesh Market” 2021-2024 Research Report na-enye nyocha dị mkpa banyere ọnọdụ ahịa nke ndị na-emepụta Fiber Glass Mesh nwere ezigbo eziokwu na ọnụ ọgụgụ, nke pụtara, nkọwa, nyocha SWOT, echiche ndị ọkachamara na ihe kachasị ọhụrụ na gburugburu ụwa. Nkwupụta ahụ gbakọọ nha ahịa, Fiber Glass Mesh Sales, Ahịa, Revenue, Oke Oke na Ekekọrịta Ahịa, usoro ọnụahịa yana ogo uto. Nkwupụta ahụ na-atụle ego sitere na ahịa nke Akuko a na teknụzụ site na ngwa ngwa dị iche iche na ịchọgharị data data tebụl na ihe osise gbasara site na Peeji nke 117 na miri emi TOC na Fiber Glass Mesh Market.
COVID-19 nwere ike imetụta akụ na ụba ụwa n'ụzọ atọ dị mkpa: site na-emetụta nrụpụta na ọchịchọ ozugbo, site na ịmepụta usoro ọkọnọ na ọgba aghara ahịa, yana mmetụta ego ya na ụlọ ọrụ na ahịa ego.
Nkwupụta Ikpeazụ ga-agbakwunye nyocha nke mmetụta nke COVID-19 na ụlọ ọrụ a.
Iji ghọta otú e si ekpuchi mmetụta mkpuchi-19 NA AK THISKỌ A - AJ RER S SLỌ
Ebumnuche nke ọmụmụ ihe a bụ ịkọwa ogo ahịa nke ngalaba dị iche iche na mba dị iche iche n'afọ ndị gara aga yana ịkọ ụkpụrụ maka afọ ise na-esote. Ezubere akụkọ ahụ iji tinye ma akụkụ tozuru etozu na nke bara uru nke ụlọ ọrụ ahụ gbasara mpaghara na mba ọ bụla metụtara ọmụmụ ihe ahụ. Ọzọkwa, akụkọ ahụ na-enyekwa nkọwa zuru ezu banyere akụkụ ndị dị oke mkpa dị ka ndị ọkwọ ụgbọala na ihe mgbochi na-egbochi nke ga-akọwapụta ọdịnihu nke ahịa Fiber Glass Mesh.
Akporo nke Fiber Glass Mesh Market:
N'afọ 2010, GlassFibreEurope boro ebubo na ụlọ ọrụ ndị China bụ Chongqing Polycomp International Corp., Jushi Group na New Changhai Group tụbara nnukwu, ngwa ahịa fiberglass dị oke ọnụ, ụyọkọ eriri, akwa na akwa na ahịa Europe na afọ ndị na-adịbeghị anya. N'otu oge ahụ, EU na-amalite nyocha mkpofu nsị nke akwa eriri akwa iko sitere na China. Ndị isi mbupụ Fiber Glass Mesh dị ka Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd, Grand Composite, Jiangsu Tianyu Fiber Co. Ltd tinyere aka. Ihe omume a emetụla ụlọ ọrụ na-ahụ maka faiba glaasi nke China.
Afọ ise mgbe e mesịrị, Na-arụsi ọrụ ike imekọ ihe ọnụ nke China Glass Fiber Industry Association, China Composites Industry Association, Ningbo City Council, ndị Ningbo iko eriri ụlọ ọrụ kpọrọ Jiangsu, Shandong na ebe ndị ọzọ 16 nnukwu iko ụlọ ọrụ bịara Ningbo, EU iko eriri okporo Fabric mgbochi ịkpofu ikpe nyocha nke ihe a iji ruo nkwenye.
N'ihi ọnụ ụzọ dị ala nke ụlọ ọrụ dị ala, enwere ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na Shandong, Hebei, Zhejiang, Jiangsu na ebe ndị ọzọ nke China nwere nnukwu ikike na ọnụ ala dị ọnụ ala. Ha na-emepụta ezigbo mma nke eriri eriri iko, ihe a na-akpaghasị mmepe ahụike nke ụlọ ọrụ ahụ, afọ ole na ole gara aga nke oge siri ike, na ụlọ ọrụ dị na China ga-eweta ọnọdụ asọmpi na-aga n'ihu.
A na-atụ anya na ahịa zuru ụwa ọnụ maka Fiber Glass Mesh na-eto na CAGR nke ihe dịka 3.4% karịa afọ ise na-esote, ga-erute 571.6 nde USD na 2024, site na 482.6 nde USD na 2019, dị ka a New Research ọmụmụ.
Nkwupụta a na-elekwasị anya na Fiber Glass Mesh na ahịa ụwa, ọkachasị na North America, Europe na Asia-Pacific, South America, Middle East na Africa. Nkwupụta a na-ahazi ahịa dabere na ndị nrụpụta, mpaghara, ụdị na ngwa.
Nweta ihe nlele nke Fiber Glass Mesh market Report 2020
Akuko n'ihu ọmụmụ ahịa na ahịa mmepe ọnọdụ na-eme n'ọdịnihu Fiber Glass ntupu Market omume gafee ụwa. Ọzọkwa, ọ na-agbawa Fiber Glass Mesh market Segmentation by Type and by Ngwa iji nyocha zuru oke na miri emi ma gosipụta profaịlụ ahịa na atụmanya.
Isi nhazi ọkwa bụ ndị a:
Isi Ngwa dị ka ndị a:
Mpụga Mgbidi Mpụga
● Na-agba mmiri mmiri
Geographically, a na-ekewa akụkọ a n'ọtụtụ mpaghara ndị dị mkpa, na ahịa, ego ha nwetara, òkè ahịa na uto nke Fiber Glass Mesh na mpaghara ndị a, site na 2014 ruo 2024, na-ekpuchi
● North America (United States, Canada na Mexico)
Europe (Germany, UK, France, Italy, Russia na Turkey wdg)
Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia na Vietnam)
● South America (Brazil, Argentina, Columbia wdg)
East Middle East na Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria na South Africa)
Nke a Fiber Glass Mesh Market Research / Analysis Report Nwere Azịza nye Ajụjụ ndị na-esonụ